ပြင်သစ်နာရီများ၊ သူတို့ကိုသင်မည်သို့ပြောသနည်း။ - UniProyecta
သင်ယူနိုင်ပါတယ် ပြင်သစ်နာရီများ ၎င်းသည်လုံး ၀ မခက်ပါ၊ အနည်းငယ်အာရုံစိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ပါကသင်သိပြီးသားထက်ပိုရလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာသင်ခန်းစာမစမီကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေါဟာရ၌အကြိမ်များစွာတွေ့နိုင်သောစကားလုံးအချို့ကိုပြောလိမ့်မည်၊ ၎င်းအားသင်တစ် ဦး စီ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုနားလည်စေရန်သင်ရှင်းပြလိမ့်မည်။
ဒုတိယနေရာ ဆိုလိုသည်မှာ "စက္ကန့်"
မိနစ်: သူဆိုလိုတာက "မိနစ်"
လေးပုံတစ်ပုံ ငါတို့ကတစ်နာရီရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကိုပြောချင်တဲ့အခါသုံးတယ်၊ အဲဒါကအချိန်ဇယားတစ်ခုရဲ့ ၁၅ မိနစ်ဒါမှမဟုတ်နေ့တိုင်းထက်တစ်နာရီနဲ့လေးပုံတစ်ပုံကိုဆိုလိုတယ်။
Et Demi: မိနစ် ၃၀ လွန်သွားပြီလို့အခြားသူကိုပြောပြချင်တဲ့အခါသုံးပါတယ်။
ရေဓာတ် မိနစ် ၃၁ မှ ၅၉ သို့သွားသောအခါပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသည်။
Moins le လေးပုံတပုံ- ၎င်းသည်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းကိုလေးပုံတစ်ပုံကိုနုတ်ရန်ဆိုလိုသည်၊ ၎င်းအားတစ်နာရီပြီးစီးရန် ၁၅ မိနစ်သာကျန်သည်။
သူ့ကို Matin: ၎င်းသည်နေ့စတင်သည့်အချိန်၊ ၀၀း၀၀ သို့မဟုတ် ၁၂း၀၀ ဖြစ်သည်။
ငါသူ့ကိုတိုင်းတာခဲ့တယ် ၎င်းသည်နေ့လယ် ၁၂ နာရီအတိအကျကိုညွှန်ပြသောစကားလုံးဖြစ်သည်။
အနုတ်လက္ခဏာ ညအခါ၌လူတို့သုံးသောစကား ပြင်သစ်များသည်ည ၉ နာရီမှညစာစားပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုသုံးလေ့ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ပြင်သစ်မှာနာရီတွေကိုရေးတဲ့အခါမင်းအမှားမလုပ်မိဖို့၊ ဒီတိုင်းပြည်မှာပျောက်နေတဲ့မိနစ်တွေရဲ့နောက်မှာရမှတ်နှစ်ခုကိုအများအားဖြင့်သိပ်မသုံးတာကိုငါတို့ရှင်းရမယ်။ ဤဘာသာစကားရှိသူများသည်အူမကြီး (:) ကိုအစားထိုးခြင်း၊ ငါတို့စောစောကပြောထားသည့်အတိုင်း၊ heure (စပိန်ဘာသာ၌အချိန်) ကိုဆိုလိုသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အသုံးမပြုသောအခြားအရာတစ်ခုသည်ဤအတိုကောက်စာလုံးများကိုနံနက်သို့မဟုတ်ညနေကိုသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်၊ le soir, le matin နှင့်l'après-midi၊ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သင်လုပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအချို့ကိုချန်ထားပါ။
နံနက် ၃း၀၀ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ညနေ ၃း၀၀ နာရီတွင်Iaprès-midi ကိုကူးစက်စေသည်
သင်မစခင်သင်သိသင့်သောအခြားအရာတစ်ခုမှာသင်ဂဏန်း ၄ လုံးကဲ့သို့အခြားနံပါတ်တစ်ခုကိုပြောရမည်ဆိုလျှင်အချိန်အတိအကျသို့မဟုတ်တစ်ဝက်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုသိသင့်သည်။ ဒီပုံမှာငါတို့ဒါကိုဖော်ထုတ်တယ်။
သင်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်လျှင်နိုင်ငံသားတစ် ဦး ကိုအချိန်ပေးနိုင်ရန်အောက်ပါနည်းအတိုင်းပြောသင့်သည်-"Quelle heure est-il"၊ ၎င်းကိုပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသိနိုင်ရန်၎င်းကိုပြောရမည်။ ဤကဲ့သို့အသံထွက်သည် - "kel oretil"
သင်အချိန်ကိုပြောချင်လျှင် "Il est______ heure" ဖြင့်စသင့်သည်၊ ၎င်းသည်တစ်နာရီထက်ပိုသောအခါ၎င်းကိုအများကိန်းသို့ပြောင်းရန်အရေးကြီးသည်၊ ဥပမာ၊ နှစ်နာရီဖြစ်လျှင် deux heures.
3 အချိန် + နေ့အချိန်
ဤဝါကျတွင်ပါ ၀ င်မည့်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ Il est + (ထိုအချိန်၌မည်သည့်အချိန်မဆို) + heure (၁ ထက်ပိုလျှင်အရေးကြီးလျှင် s ကို + မိနစ်) ထည့်ပါ။
၂း၀၀ ——–> Il est deux အနာကျက်သည်
၆:၅၀ ——–> ငါကဒီဆေးခြောက်က cinquante ပဲ
၅:၁၀ ——–> Il est cinq heures dix
ဒါကပြင်သစ်လိုအချိန်ကိုပြောနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခု၊ နာရီဝက်ဒါမှမဟုတ်တစ်နာရီရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလိုအပိုင်းအစတွေလိုမျိုးသီးခြားအသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးပါတယ်။ ထို့နောက်ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်ဤအရာကိုမည်သို့ပြောရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
၈:၁၅ ——–> တော်တော်သက်သာတယ် လေးပုံတစ်ပုံ.
၈:၁၅ ——–> တော်တော်သက်သာတယ် နှင့် demie
၈:၄၅ ——–> ငါသက်သာတယ် moins le quart ။
အချိန် + နေ့အချိန်
ဤနည်းအားဖြင့်ပြင်သစ်၌အချိန်ကိုနေ့ (နေ့၊ ည၊ မွန်းတည့်) တို့တွင်မည်သို့ပြောရမည်ကိုသင်သွန်သင်လိမ့်မည်။ Il est + [hora] + heure (s) [ဝါကျတွင် S သည်ကွဲပြားသောအခါသမယများတွင်ရှိသည်] + du matin / de l'après-midi / du soir / midi / minuit (ကွဲပြားသည်ကိုသတိရပါ။ နေ့များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ )
မနက်ခင်း ——–> ၁၀:၀၅ ——–> Il est dix-heures zéro cinq du matin
နေ့လည်-—–> ၂:၀၀ ——–> Il est deux-heures de l’après-midi
ည ——–> ၈:၀၀ ——–> အလွန်သာယာသည် du soir ဖြစ်သည်
Medianoche ——–> ၀၀:၀၀ ——–> အီလ် သန်းခေါင်
မွန်းတည့် ——–> ၁၂း၀၀ ——>> အင်း MIDI
အချိန်အတိအကျကိုပြင်သစ်လိုပြောနိုင်ရန်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာဝါကျတည်ဆောက်ပုံကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကနောက်ဆုံးကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်။ Il est + [time] + pile ။
၉း၀၀ မှာသက်သာတယ်
၉:၁၀ ——–> Il est neuf heures dix
၉:၁၅ ——–> Il est neuf heure လေးပုံတစ်ပုံ
၉:၂၀ ——–> Il est neuf heure vingt
၉:၂၅ ——–> Il est neuf heure vingt-cinq
၉:၁၅ ——–> Il est neuf heure နှင့် demie
၉:၃၅ ——–> Il est dix အနာကျက်သည် လျော့နည်း နှစ်ဆယ့်ငါး
၉:၄၀ ——–> Il est dix အနာကျက်သည် လျော့နည်း နှစ်ဆယ်
၉:၄၀ ——–> Il est dix အနာကျက်သည် moins le quart ဖြစ်သည်
၉:၃၅ ——–> Il est dix အနာကျက်သည် လျော့နည်း dix
၉:၄၀ ——–> Il est dix အနာကျက်သည် လျော့နည်း cinq
ငါတို့မင်းကိုပြောပြချင်တဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုကမင်းဒီနည်းလမ်းတွေကိုလေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကပြင်သစ်ကလာတဲ့သူ (သို့) ဘာသာစကားစုံလင်စွာသိတဲ့သူနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အဲဒါကိုလုပ်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းအဲဒါကိုရေးမယ်ဆိုရင်အဲဒါကအရမ်းခက်ခဲပေမယ့်မဟုတ်ဘူး။ သင်ယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အခြားဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုကမင်းအဲဒါကိုလေ့လာဖို့ပိုလွယ်ရင်ငါတို့အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့ဘဲ။
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဘာသာစကား » ပြင်သစ် » ပြင်သစ်နာရီများ၊ သူတို့ကိုသင်မည်သို့ပြောသနည်း။